Yaa’iin damee seektara misooma magaalaa fi konistraakshinii gaggeeffamaa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On Sep 20, 2021 55
Finfinnee, Fulbaana 10, 2014 (FBC)- Yaa’iin damee seektara misooma magaalaa fi konistraakshinii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiraachuu ibsame.
Yaa’icharratti hooggantoonni ministeera misooma magaalaa fi konistraakshinii fi hooggantoonni damechaa naannolee fi bulchiinsa magaalotaa akkasumas keessummoonni waamichi taasifameef argamuu ibsameera.
Minstirri Ministeera Misooma Magaalaa fi Konistraakshinii Injinar Ayishaa Mahaammad, onnee Ityoophiyummaatiin hojjennaan magaalota jireenyaaf mijatoo ta’an keessatti barri itti Ityoophiyaa miidhagdee fi badhaate arginu fagoo akka hin taane ibsaniiru.
Magaalaa fi magalummaan beekumsaa fi hubannaan deeggaramnaan kennaa, haalaan qajeelfamuu fi hubannaan hoogganamuu yoo dhabe balaa akka ta’e Injinar Ayishaan ibsaniiru.
Dhugaa jiru kana hubachuun mootummaan yeroo kamiyyuu caalaa guddinaa fi babaldhina magaalotaaf, miidhaginaa fi milkaa’ina jireenya lammiileef tooftaalee garaagaraa bocuun hojjechaa kan jiran ta’uu ibsaniiru.
Bara bajataa 2013 qindoominaan waan hojjetameef waggoota muraasa keessatti gaaffilee misoomaa hin deebi’iiniif deebii kennuun kan danda’ame ta’uu Injinar Ayishaan yaa’icharratti kaasaniiru.
Xumurarrattis dhugaa Ityoophiyaa addunyaatti beeksisuuf sagantaa sochii ‘Poostaa Adii gara Masaraa Adiitti” jedhu eegalchiisuu isanii ragaan Ministeera Misooma Magaalaa fi Konistraakshiniirraa argame ni muul’isa.
Godina Booranaatti lammiilee miidhamaniif deeggarsi miidhaanii kuntaalli kumni 27fi…
Ayyaanni Moolidaa Allahaan karaa Nabiyyuu Mahaammadiin eebba addunyaaf laatee itti…
Preezdaant Shimallis Abdiisaa ayyaana guyyaa dhalootaa Nabiyyuu Mahaammad…
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee iddoo ijaarsa giddugala hawaasa Goofaatiif laachuu…
Dhiibbaa alaa dandamachuuf Qonna ammayyeessuun murteessadha…
Godina Booranaatti lammiilee miidhamaniif deeggarsi…
Ayyaanni Moolidaa Allahaan karaa Nabiyyuu Mahaammadiin eebba…
Preezdaant Shimallis Abdiisaa ayyaana guyyaa dhalootaa…
Oduu biyya keessaa9608